Honeywell WiFi Touchscreen Thermostat nwụnye Manual - Akwụkwọ ntuziaka +
Honeywell WiFi Touchscreen Thermostat nwụnye Manual
1 Comment na Honeywell WiFi Touchscreen Thermostat nwụnye Manual
Home » Honeywell » Honeywell WiFi Touchscreen Thermostat nwụnye Manual
1 Ntinye ntuziaka
2 N'ime igbe ị ga-ahụ
4 Atụmatụ gị Wi-Fi thermostat
5 Ihuenyo mbu iru
6 Ozi center ozi
7 Atọrọ atọ oge ịzọpụta ike gị
8 Tọlite ​​thermostat gị
9 Wụnye thermostat gị
11 Gụkwuo Banyere:
11.2 Akwụkwọ ntuziaka ndị metụtara ya
Mmanụ a Wiụ Wi-Fi Touchscreen Programmable Thermostat
Ọzọ Honeywell Pro Thermostat Akwụkwọ ntuziaka:
RTH5160 Na-abụghị Ihe Na-eme Ihe Na-eme Nchekwa
WiFi Touchscreen Thermostat nwụnye Akwụkwọ ntuziaka
WiFi Agba Touchscreen thermostat
N'ime igbe ị ga-ahụ
Wallplate (nke metụtara na thermostat)
Ihe nkedo na arịlịka
Mkpụrụ ego cell cell (n'ime azụ nke thermostat)
Ndenye Malite Nduzi
Kaadị NJ Kaadị
Ekele maka ịzụrụ Honeywell Wi-Fi touchscreen programmable thermostat. Mgbe e debara aha na Honeywell's Total Connect Comfort Solutions, ị nwere ike ịchọta ma jikwaa sistemụ kpo oku na usoro ikuku n'ụlọ gị ma ọ bụ azụmaahịa gị- ị nwere ike ijikọ usoro nkasi obi gị ebe ọ bụla ị gara.
Mkpokọta Njikọ nke Honeywell bụ ezigbo ihe ngwọta ma ọ bụrụ na ị na-agagharị ugboro ugboro, nwee ụlọ ezumike, azụmaahịa ma ọ bụ jikwaa akụ Investment ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọ udo nke uche.
Kpachara anya: Igwe mmiri a na-arụ ọrụ na sistemu 24 volt. Ọ gaghị arụ ọrụ na usoro 120/240 volt.
Kpachara anya: Igwe mmiri a nwere batrị Lithium nke nwere ike ịnwe ihe onwunwe Perchlorate.
Perchlorate Ihe - pụrụ iche njikwa nwere ike ide.
MERCURY Rịba ama: Etinyela thermostat ochie gị na ahịhịa ma ọ bụrụ na o nwere mercury na ọkpọkọ akàrà. Kpọtụrụ Thermostat Recycling Corporation na www.thermostat-recycle.org ma ọ bụ 1-800-238-8192 maka ozi gbasara otu esi aga na ebe ị ga-atụfu thermostat ochie gị n'ụzọ dị mma.
Rịba ama: Iji zere mmebi compressor nwere ike, agbaghị ikuku conditioner ma ọ bụrụ na mpụga okpomọkụ dara n'okpuru 50 ° F (10 ° C).
Gaa na wifithermostat.com ma ọ bụ kpọọ 1-855-733-5465 maka enyemaka tupu ịlaghachi thermostat na ụlọ ahịa ahụ.
Atụmatụ gị Wi-Fi thermostat
Na thermostat ọhụrụ gị, ị nwere ike:
Jikọọ na tontanetị iji nyochaa ma chịkwaa usoro kpo oku / jụrụ gị
Lelee ma gbanwee usoro sistemụ kpo oku / jụrụ gị
Ele ma tọọ ọnọdụ okpomọkụ na oge
Anata alerts via email ma na-akpaka upgrades
Thermostat ọhụrụ gị na-enye:
Teknụzụ Azịza Smart
Okpomọkụ / jụụ akpaaka mgbanwe
Ihuenyo mbu iru
Ozugbo etinyere thermostat Wi-Fi gị, ọ ga-egosipụta ihuenyo ụlọ. Akụkụ ngosipụta a ga-agbanwe dabere na otu ị si ele ya. Iji gbanwee ntọala, jiri mkpịsị aka pịa mpaghara kwesịrị ekwesị ka ọ dịkwa obere.
Ọ gwụla ma ị gbanwere ọrụ ọkụ, ihuenyo ahụ na-enwu mgbe niile na obere ike. Mgbe ị metụrụ ihuenyo ahụ, ihuenyo ahụ na-enwu gbaa.
Ozi center ozi
Atọrọ atọ oge ịzọpụta ike gị
A na-edozi thermostat a na ntọala mmemme mmemme maka oge anọ. Iji ntọala ndabara nwere ike belata mmefu kpo oku / obi jụrụ gị dị ka 33% ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe. Ego nwere ike ịdị iche na mpaghara obodo yana ojiji ya.
Tọlite ​​thermostat gị
Mwube gị Wi-Fi programmable touchscreen thermostat dị mfe. Edegoro ya nke ọma ma dịkwa njikere ịga ozugbo e tinyechara ya ma debanye aha ya.
Wụnye thermostat gị.
Jikọọ ya na netwọk ikuku nke ụlọ gị.
Debanye aha n'ịntanetị maka ịnweta ohere.
Tupu ịmalite, nwere ike ị chọrọ ile a nkenke nwụnye video. Jiri QR Code® n'ihu nke ntuziaka a, ma ọ bụ gaa wifithermostat.com.
Wụnye thermostat gị
You nwere ike ịchọ ngwaọrụ ndị a iji wụnye thermostat a:
Nke 2 Phillips scredriver
Obere akpa n'akpa uwe
Drill na ibe n'ibe (3/16 ”maka drywall, 7/32” maka plasta) (nhọrọ)
Teepu eletriki (nhọrọ)
Iji kpuchido akụrụngwa gị, gbanyụọ ike na sistemụ kpo oku / jụrụ gị na igbe nbibi ma ọ bụ sistemụ sistemụ.
Wepu thermostat ochie.
Wepu thermostat ochie mgbe ị na-ahapụ mpempe akwụkwọ ahụ na wiring n'ebe ọ bụla. Were foto nke wires na thermostat ochie gị maka ntụle ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere thermostat ochie nke nwere ọwara mercury a kara akara, tụgharịa na peeji nke 2 maka ntuziaka maka mkpofu kwesịrị ekwesị.
Jiri akara mmado enyere iji gosi waya ọ bụla ka ịkwụpụ ya. Label wires dị ka ochie thermostat ọnụ designations, ọ bụghị site waya na agba.
Cheta na: Ọ bụrụ na onweghị mkpado dabara na akara njiri waya, dee aha njirimara na mkpado oghere.
Wepu mpempe akwụkwọ ahụ.
Wepu ihe mgbochi ochie na mgbidi mgbe ejiri akara niile wee kwụpụ.
Iche thermostat Wi-Fi na mpempe akwụkwọ ahụ.
Na thermostat ọhụrụ gị, jiri mkpịsị aka jidere mkpịsị aka aka elu na ala nke mpempe akwụkwọ ahụ, jiri aka nke ọzọ ya na thermostat (n'ihu). Sere iche iche.
Ugwu na mpempe akwụkwọ maka Wi-Fi thermostat.
Ugwu gị ọhụrụ wallplate iji kposara na arịlịka gụnyere na thermostat.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa:
Dichaa 3/16-na oghere maka drywall.
Dichaa 7/32-na oghere maka nkedo.
Cheta na: Ihe ntanetị nke Wi-Fi chọrọ ka eriri C rụọ ọrụ. C, ma ọ bụ nkịtị, waya na-eweta 24 VAC ike na thermostat. Ọtụtụ igwe eji arụ ọrụ ma ọ bụ batrị ejiri rụọ ọrụ anaghị achọ waya C. Ọ bụrụ na ịnweghị waya C, gbalịa:
Na-achọ waya ejibeghi nke a na-agbanye n'ime mgbidi. Jikọọ na waya na C na-elele na ọ na-ejikọrọ na 24 VAC nkịtị gị kpo oku / jụrụ usoro. Lelee ngalaba vidiyo na wifithermostat.com.
Wụnye waya ọhụrụ. Ọ bụrụ na achọrọ, kpọtụrụ onye ọrụ ngo iji wụnye waya ọhụrụ (gaa wifithermostat.com ịchọta onye ọrụ ngo na mpaghara gị).
n'ihi na ot sistemụ kpo oku / ikuku (gas, mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik), lee peeji nke 16. Lee “Nkọwa okwu” na ibe 65 maka nkọwa ndị ọzọ.
Maka a igwe mgbapụta ọkụ sistemụ, lee peeji nke 17. Lee “Nkọwa okwu” na ibe 65 maka nkọwapụta ọzọ.
Wiring (usoro usoro)
7A. Jikọọ wires.
Nweta eriri ikuku Wi-Fi na sistemụ arụmọrụ gị. Dakọtara na kpọọ na wires na ọnụ kpọọ. Ikwesiri inwe waya C. Hwɛ kratafa 15.
b. Kpoo ihe nkedo, tinye eriri n'ime oghere n'ime onu onu ya, wee kpoo ahihia.
c. ihe Pụgharịa waya ọ bụla gafere n'ime mgbidi ahụ.
d. Gaa n'ihu na peeji nke 22.
Waya (usoro mgbapụta ọkụ naanị)
7B. Jikọọ wires.
Waya Wi-Fi thermostat gị okpomọkụ mgbapụta.
a. Dakọtara na kpọọ na wires ka ọnụ kpọọ na ọhụrụ thermostat. Ikwesiri inwe waya C. Hwɛ kratafa 15.
c. Ọ bụrụ na thermostat ochie nwere wires dị iche na AUX na E, tinye wires abụọ n'ime
E / AUX ọnụ. Ọ bụrụ na thermostat ochie nwere waya na AUX nwere ihe nkwụsị na E, tinye waya na ọnụ E / AUX. Ọ dịghị jumper a chọrọ.
d. Pụgharịa waya ọ bụla gafere n'ime mgbidi ahụ.
e. Gaa n'ihu na peeji nke 22.
Ọzọ wiring (okpomọkụ mgbapụta usoro naanị)
Jiri nke a ma ọ bụrụ na aha waya gị adabaghị na akara aha ya.
Cheta na: Ga-enwerịrị eriri C ma ọ bụ otu ihe. Hwɛ kratafa 15.
Igodo ikuku ọzọ (naanị usoro mgbapụta ọkụ)
1. Hapụ igwe i papu mmiri n’etiti ọnụ R na RC.
2. Ọ bụrụ na thermostat ochie gị nwere ma wires V na VR, lelee wifithermostat.com maka enyemaka.
3. Ọ bụrụ na thermostat ochie gị nwere eriri O na B, kewaa eriri B na C. Ọ bụrụ na eriri ọzọ dị na ọnụ C, lelee wifithermostat.com maka enyemaka. Tinye eriri waya na ọnụahịa O / B. Tọọ Ọrụ Ntọala 0190 ruo 0 (lee peeji nke 55).
4. Ọ bụrụ na thermostat ochie gị nwere O waya ma ọ bụghị waya B, tinye eriri waya O / B.
5. Ọ bụrụ na thermostat ochie gị nwere iche Y1, W1 na W2 wires, lelee wifithermostat.com maka enyemaka.
6. Nke a bụ usoro nyocha. Ọ bụrụ na nyocha ahụ hụrụ nsogbu, ị ga-ahụ ọkụ uhie na akuku aka nri nke thermostat (na-enwu site na mkpuchi).
7. Ọ bụrụ na thermostat ochie nwere wires dị iche na AUX na E, tinye wires abụọ n'ime ọnụ E / AUX. Ọ bụrụ na thermostat ochie nwere waya na AUX nwere ihe nkwụsị na E, tinye waya na ọnụ E / AUX. Ọ dịghị jumper a chọrọ.
Ejila ọnụ K.
Tinye batrị mkpụrụ ego (gụnyere), na-elele polarity ziri ezi.
Tinye thermostat na mgbidi ahụ.
Dozie thermostat ahụ na mpempe akwụkwọ ahụ wee banye ebe ahụ.
Gbanwee usoro kpo oku / usoro jụrụ oyi
Gbanwee ike laghachi na ON maka usoro ikpo ọkụ / ikuku gị na igbe nkwụsị ma ọ bụ usoro sistemụ.
Tọọ ụbọchị na oge.
Pịa s ma ọ bụ bọtịnụ iji gbanwee oge na ụbọchị gosipụtara.
Pịa ma jide bọtịnụ iji gbanwee ntọala ngwa ngwa.
Kpebisie ike na usoro usoro kpo oku gị.Ọ bụrụ na gị usoro ụdị ot otu ogbo, -aga n'ihu na "Ijikọ gị Wi-Fi na netwọk" na peeji nke 27.
Ọ bụrụ na usoro gị bụ:
• Ot ot multistage okpomọkụ na jụụ
• Mgbapụta ọkụ na-enweghị okpomọkụ ndabere
• Mgba ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ
• Kpoo naanị
• Naanị jụụ
Hụ peeji nke 51 iji kwekọọ na thermostat gị na ụdị sistemụ gị, wee gaa n'ihu “Ijikọ na netwọk Wi-Fi gị” na ibe 27.
Ọ bụrụ na ịnweghị n'aka nke ụdị kpo oku / usoro jụrụ gị ma ọ bụ nwee ajụjụ ndị ọzọ, gaa wifithermostat.com
Iji mezue usoro a, ị ga-enwerịrị ngwaọrụ ikuku nke ejikọrọ na netwọk ikuku nke ụlọ gị. Otu n'ime ụdị ngwaọrụ ndị a ga-arụ ọrụ:
Ọ bụrụ na ịrapara… n'oge ọ bụla na usoro a, bidogharịa thermostat ahụ site na iwepu thermostat na mpempe akwụkwọ ahụ, chere maka sekọnd 5, ma zighachi ya na mpempe akwụkwọ ahụ. Laghachi na Nzọụkwụ 1 na usoro a, nke na-amalite na ibe na-esote.
Honeywell WiFi Touchscreen thermostat - Mmemme ntuziaka
Honeywell WiFi Touchscreen Thermostat Manual - Kachasị PDF
Honeywell WiFi Touchscreen Thermostat Manual - PDF izizi
Honeywell WiFi Agba Touchscreen Thermostat nwụnye Ntuziaka Ntinye Ntuziaka Honeywell Wi-Fi Agba Touchscreen Programmable Thermostat Model: RTH9580 ...
Honeywell WiFi Touchscreen Thermostat Mmemme Manual Mmemme ntuziaka Honeywell Wi-Fi Touchscreen Programmable Thermostat Model: RTH8580WF Ndị ọzọ ...
Honeywell WiFi Agba Touchscreen Thermostat Mmemme ntuziaka Onye ọrụ ntuziaka Mmemme ntuziaka Onye ọrụ ntuziaka Wi-Fi Agba Touchscreen Programmable Thermostat Honeywell RTH9580 ...
Honeywell WiFi Thermostat nwụnye Akwụkwọ ntuziaka Nwụnye Manual Honeywell WiFi Thermostat Model: RTH65801006 & RTH6500WF Smart ...
Honeywell VisionPRO WiFi Thermostat Ntuziaka ntuziaka User Manual WiFi Thermostat Honeywell VisionPRO Ọzọ Honeywell Pro Thermostat ...
Honeywell WiFi Thermostat Mmemme ntuziaka Onye ọrụ ntuziaka Mmemme ntuziaka Onye ọrụ ntuziaka Honeywell WiFi Thermostat Model: RTH65801006 & RTH6500WF ...
December 17, 2020 March 29, 2021 Ihe naHoneywellTags: Honeywell, mmemme, Igwe, ihuenyo mmetụ aka, WiFi
Honeywell WiFi Agba Touchscreen Thermostat Mmemme ntuziaka Onye ọrụ ntuziaka
Honeywell RTH5160 Non-Programmable Thermostat Ntinye na Ntuziaka Ntuziaka
Nguyen ekwu, sị:
March 1, 2021 na 12: 35 am
Anyị na-eji ihe eji eme ka ikuku na-ekpo ọkụ na oyi. Igwe ikuku a emeela ochie ka enweghị njikọ WiFi, Achọrọ m ịgbanwe nke nwere njikọ WiFi, nke enwere ike gbanwee na iPhone na ebe ọ bụla. Biko ị nwere ike inye m ndụmọdụ ụdị mgbanwe kwesịrị ekwesị yana otu esi etinye wiwi ahụ?
Nhà mình có xử dụng một bộ điều hòa HoneyWell cho máy điều hòa nóng lạnh. Bộ điều hòa này loại củ nên không có kết nối Wifi, mìnnh muốn thay loại có kết nối Wifi, có thể điều chỉnh được trên iPhone và ở bất cứ nơi nào. Bạn có thể vui lòng tư vấn cho mìnnh cần thay loại nào phù hợp vá cách cài ốt nối dây ra sao?
Rất cảm ma ọ bụ ihe.
Ntuziaka Saramonic Blink500 Pro Ultracompact 2.4 GHz Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ igwe okwu ikuku ikuku
TAOTRONICS TT-SK018 Obere ntuziaka onye ọrụ ụda
ANKER A2561 PowerWave Magnetik 2-in-1 Ntuziaka onye ọrụ guzoro
Akwụkwọ ntuziaka ihe mmetụta sensọ n'ime ụlọ Honeywell C7189R1004
RYCO RCA329M Cabin Air Filter N99 MicroShield Ntuziaka